Motivation for success :: रेणु दाहालका लागि भगवान बनेर आए कृष्णराज धरेल !
रेणु दाहालका लागि भगवान बनेर आए कृष्णराज धरेल !
प्रकाशित मिति : बिहिबार, असार ९ २०७९
चितवन – चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन साँघुरो हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या छ । महानगरपालिकाकी मेयर लामो समयदेखि फराकिलो भवन बनाउन जग्गाको खोजिमा थिइन् । त्यही बेलामा नेपाल नेत्रज्योति संघका अध्यक्ष कृष्णराज धरेलसँग मेयर दाहालको कुरा भयो ।
सामान्य छलफलमा नै धरेलले हुन्छ भनिदिए । संघका अध्यक्ष धरेल महानगरपालिकालाई एक विघा १५ धुर जग्गा दिन राजी भए । महागनरपालिकासँगै रहेको संघको जग्गा महानगरको नाममा लैजाने गरी बिहीबार मेयर रेनु दाहाल र नेपाल नेत्रज्योति संघ चितवनका अध्यक्ष धरेलबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित भरतपुर हाइटमा नेपाल नेत्रज्योति संघ, चितवनले भोगचलन गर्दै आइरहेको एक बिघा ७ कठ्ठा १५ धुरमध्ये भरतपुर महानगरपालिकालाई एक बिघा १५ धुर जग्गा दिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
सोही ठाउँमा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पतालको बहिरंग सेवा विभागको भवन भने यथावत रहनेछ । त्यसका लागि ७ कठ्ठा जमिन संघले आफैसँग राखेको हो । सम्झौता पत्रमा भरतपुर आँखा अस्पतालको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अस्पताल भवन निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने उल्लेख छ । साथै महानगरपालिकाले उक्त भवनको नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुर मिनाहा गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सम्झौतापछि सो जग्गा भरतपुर महानगरपालिकाको नाममा लालपूर्जा बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले प्राप्त गरेको जग्गामा आइसल्याण्ड जंगल रिसोर्ट सञ्चालनमा रहेको थियो । सो रिसोर्टको सम्झौता सकिएपछि अहिले खाली अवस्थामा रहेको छ ।
सो जग्गा भौतिक संरचनासहित युएसएडले २०४६ पुस २६ गते नेपाल नेत्रज्योति संघलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले महानगरपालिकाले बजारको मुटुमा १ विघा १५ धुर जग्गा पाउनु अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता भएको बताइन् । ‘मुख्य राजमार्गमै एक विघाभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्नु ठूलो सफलता हो, यसले महानगरको प्रशासनिक क्षेत्र फराकिलो र आकर्षक हुने भयो’, मेयर दाहालले भनिन् ।
महानगरपालिकाको अहिले रहेको भवनको पूर्वतर्फ नयाँ प्रशासनिक भवन बन्नेछ । हाल महानगरपालिका मातहतमा रहेको जग्गामात्र प्रशासनिक भवनका लागि साँघुरो हुने भएपछि नेपाल नेत्रज्योति संघले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा लिन महानगरपालिकाले जोड गर्दै आएको थियो ।
सात कठ्ठामा निर्माण हुने ६ तले नयाँ प्रशासनिक भवनको कुल लागत ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेको छ । आगामी साढे दुई वर्षमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भवनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि ३५ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । अपुग रकम महानगरले व्यहोर्ने छ ।
महानगरले प्रशासनिक भवन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । ठेकेदारसँग सम्झौता भएको मितिले ३० महिनाभित्र बनाइसक्ने भवन ६ तले हुनेछ । जम्मा क्षेत्रफल १४ हजार १५२ वर्गमिटर बन्ने भवनमा ५० गाडी र २५० वटा मोटरसाइकल अट्न सक्ने अन्डर ग्राउण्ड पाकिङ हुनेछ ।
भवनमा दुईवटा लिफ्ट, साँस्कृतिक हल, पुस्तकालय रहनेछ । त्यस्तै प्रत्येक तलामा जेष्ठ नागरिक विश्राम कक्ष रहनेछ ।
भवनमा १५८ वटा साना ठूला कार्य कक्ष रहने छन् भने २२१ वटा कोठाहरु रहने छन् । भवन शिलान्यास गत चैत ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए ।